Wonke umuntu uyazi isitatimende ukuthi inja kuyinto umngane yomuntu. Kodwa izimo kanye nezimo lapho uwukuhlasela inja abantu. Ngaphezu kwalokho, ngezinye izikhathi abezwani ukuhlasela nomunye, futhi wafakaza ukuthi izigameko ezifana nalezi kungaba kokubili ngabantwana nangabantu abadala. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuhlaselwa inja ngokuzumayo, ngaphandle kwesizathu. Nokho, njengoba umthetho, lokhu akulona iqiniso. Uma ukuhlaselwa inja, ukuthi benzeni kulesi simo, kufanele asabele kanjani ukuhlaselwa, ukuqonda ngokushesha izimbangela ngokuziphatha kwayo futhi uthathe izinyathelo ezidingekayo.
Izizathu lapho isilwane kungaba ukuhlasela, kungasiko. Izimbangela ubudlova ezinjeni kungenzeka kanje:
Ukuvikelwa endaweni yayo. Njengomthetho, insimu ukuzivikela ngokuhlasela izitha zayo kungenzeka kube nokungqubuzana, izinja. izinja zesifazane wenze lokhu akuvamile. Mhlawumbe abaningi ngaphawula isimo lapho isilwane iya wena endaweni ethile, bese zenyuka ngokushesha uyama futhi ebuya. Le ndawo, okuyinto wathatha inja indoda wakukholwa impahla yabo siqu, futhi ngenxa yalokho ivikela ke.
Ukuvikelwa wenzalo yabo. Kodwa-ke, inja uyohlale ukuvikela namazinyane azo zabo, indlela ozokwenza ngayo, kuncike ngamunye ethile, amatshe ayo nokunye. Abanye bavele babe ngikhalelwa, esongela ngokumamatheka, nezinye sebekhathele ukukhonkotha kwazo landindizela ngisho uzame ukuhlasela abedlula ngendlela.
Imphumelelo, abafundisekile kahle, hhayi abaqeqeshiwe imiyalo inja. Kukhona futhi abanikazi abakholelwa ukuthi isilwane yabo kufanele iyakuluma abanye, ngaleyo ndlela bebonisa ukuthi ivikela umnikazi walo.
Indlela yokugwema inja kuhlasela
Ukuhlasela izinja abantu - hhayi siyindlala. Kodwa okuhle nakakhulu, ekuqaleni ukwenza konke ukuyigwema. Ukuze uqale uqonde ukuthi kungani lesi silwane ngokwawo ngakho, ukuhlola isimo ubone uma kukhona isibalo siyinzalo yakhe, kungaba nabanolaka uqobo. Mhlawumbe inja uzizwa ezisengozini ngokumelene inkosi yayo noma ngomhawu ivikela indawo eyaba wakhe. Kulezi zimo, vele uye emhlabeni eceleni inja, kodwa noma kunjalo, musa abaleke! Isilwane kungaba eziphonsa ekungenisa jaha ngenjongo ukusabisa.
Ngakho, ukuthi baziphathe kanjani uma ukuhlaselwa inja:
Into esemqoka - ningatatazeli. Uma zihlaselwa inja, yini okufanele uyenze kwasekuqaleni - kuyinto sihlale sizolile.
Akunakusetshenziswa ungaphambuki emaceleni ukuze inja noma ngaphezulu emuva, lokhu kuyinselele oqondile ukuhlasela isilwane. Phenduka ukubhekana naye futhi wonke umzimba.
Ungazami ukusebenzisa kude inja, banayo eqinile jaha isazela ukweqiwa, ngakho Misa futhi nime, musa ukuthutha.
Ungabonisi ukuthi nizizwa nesaba lapho nibhekene. Izilwane uzizwe saba, intukuthelo ngakho izozama kuhlasela.
Uma uphelelwa inja, kodwa ibanga phakathi kwenu namanje okusezingeni eliphezulu, ungazama ukwenza kanjalo: i-jump abukhali aphume phambili, uqonde ubheke wakhe, kungaba into exakayo, futhi ngeke ayeke, uma Ungashiyi.
Umsizi isenzo esinjalo: goba abukhali phansi wazishaya aphakamise phansi futhi aphonse cobblestones kuye. Uma ngaphansi kwezinyawo Roll amatshe, tindvuku, ababamba aphonse ku kufike kuwe inja, ngcono nakakhulu nedlanzana amatshe amancane. Ngale ndlela ukunikeza isilwane ukuze ubone ukuthi ubani onamandla, futhi enjalo abazi ukuhlasela, yebo, uma kungukuthi itheleleke ezinamarabi.
Uma kungekho amatshe acekelwa phansi, nabanye, sebenzisa izikhwama, izambulela, okhiye, konke kukhona ususondele.
Enye indlela elula - kungcono ngokumemeza okukhulu ngesikhathi isilwane. I "Fu" iwukuba zishiwo, yayikhona intuthuko engatheni, ngokuqiniseka.
Ochwepheshe ukusebenza izinja Kunconywa isimo esingaba yingozi nabo ukuthatha sokuma ilungile futhi banake isilwane noma ehlangeni. On iseluleko inja bokudla abayozenza lapho behlaselwa yinja, kutuswa ukwenza:
Zama balinganisele, kubaluleke kakhulu. Phela, inja uyoziphonsa at wena nebutho ezingaba knock phansi, ungase bawe, khona-ke uyoba ukuze aphebeze nzima kakhulu ukuba endaweni enkulu isicelo Ukulunywa, kuhlanganise ubuso.
Kukhona kungenzeka ukuthi une ukubulala isilwane, sivikele ukuphila kwakhe. Ngoba kufanele ube ukulungele ngokwenqondo lokhu.
Thatha isikhundla umzimba lapho umlenze owodwa echayeke phambili - izenzo lokulwa. Lapho wena uyoziphonsa inja ngokucijile adalule isandla phambili, kuyoba into waphuthuma endaweni yokuqala, okungukuthi, lena inhlanzi abomvu. A ngezinyawo bese ushaya yakhe ekhanda.
Inja ekhaya, ehlasela izozama ukuluma esandleni sakhe. Kodwa izinja ehlangeni ehlasela esuka ngemuva, ikakhulukazi aphonswe kwezinyawo zakhe, nikwenza phezu zobuqili.
Zonke amathiphu engenhla isebenza ngokuyinhloko zibhekisela kubantu enempilo hhayi igciwane ngamarabi. Endabeni a bebangalasa ukuthethisa njengoba akuveza ngangokunokwenzeka, zama ukuze zidonse ukunaka abanye, noma Bounce. Phela, ukuze ugweme ukulunywa noma esilwaneni ezinamarabi cishe akunakwenzeka, kodwa kudingeke ukuba nina nilwe emuva amanxeba babe letivumelana nemphilo.
Yini okumele uyenze uma ungeke ukwazi ukugwema kokuba yenhlwathi
Into ebaluleke kakhulu ukuba baqonde: akudingekile ukuba nethemba lokuthi inja ukuthi alunywe wena, akukhona esithathelwanayo. Uma unethemba lokuthola i-akuyona ukubona udokotela ngesikhathi, imiphumela iyoba ngokungathí sina ngokweqile. Kubalulekile ukuqala ukuba libhekele wokugoma ukuvimbela amarabi othuthukayo, kulandele engaba yingozi lapho iphuzwa.
Uma ubona liyisibonelo ngqo ukuthi inja singenele noma utheleleke ezinamarabi, amathe alesi sinambuzane econsa ezivela kuye, yena odlula ngentukuthelo konke akubonayo emhlabeni, zonke Ukuhanjiswa, ngeke sikwazi ukulawula ngokwakho, qaphela. Kulesi simo, kubalulekile ukuvimbela bite. Ngemva igciwane amarabi ezitholakala ngamathe. Futhi uma une-bite isilwane, ngamathe igciwane Ungafaka emzimbeni.
Kuyinto indlela nokusebenza kahle umgomo kuzoncika nesikhathi ukunakekelwa. Ngoba ngokushesha ngemva kokulunywa, xhumana isikhungo wezokwelapha eseduze. Uma elimele kanzima noma ungekho emzaneni, ngokushesha shayela i-ambulense.
Izindlela ukuvikela izinja ehlasela
Uma usesimweni esinjalo, abaningi, ikakhulukazi kusukela kokwesaba yenhlwathi noma ukungazi. Uma ukuhlaselwa inja, yini okufanele uyenze kwasekuqaleni, uzama ukunciphisa umonakalo noma ngisho ukuba sizigweme? Khumbula ngala macebiso alandelayo:
Lapho liyasibhozomela isilwane unengalo noma umuntu okwamanje lapho isondela iphuzu behlaselwa, ngokushesha yenza okulandelayo: uma inja ukhethe kuhlasela iphuzu isandla esithubeni nje usuka endaweni lapho ubumi khona, ngokushesha bend ke endololwaneni, push esifubeni. Uma ngabe injongo kuhlasela ubuso, ukuze awuvikele bite, kokuba washaywa inja indololwane nokuvikela isandla ebusweni bakhe.
ukuhoxiswa okukhulu endaweni lapho nje zazinjalo, ukugwema umzimba yenhlwathi zingene imfuyo ukubamba kuphela izingubo, futhi fly ngokwalo.
Lapho inja Ubamba ngezinyawo, futhi ngokuphazima kweso ukufulathela ukuma iphuzu futhi ikhanda dudula isandla. Izikhathi eziningana ukuba simshiye, uyakhathazeka kuye futhi yena wayemane nesithukuthezi kuwe ukuhlasela.
On ukudayiswa ungabona izinja self-oxosha: zonke izinhlobo zezinambuzane, izifutho, aerosols. Kodwa ungayisebenzisi, ngoba cishe kuzo zonke izimo, bona ngibulale kuphela kwabathukuthelisa isilwane nakakhulu, okubangela isimo sobudlova okwalandela.
Indlela uzivikele inja elwa izinhlobo
Ukuhlasela inja noma ehlangeni ekhabo, nje oqaphe inkosi yakhe - akusiyo kubi kangako. Ngisho amarabi ndlovu ngezinye izikhathi ngaphansi kuyingozi ukwedlula nolaka lokulwa izinhlobo. Uma ukuhlaselwa inja ukuthi wenze ucishe ecacile amathiphu eshiwo ngenhla. Amanxeba ukuphulukisa, umgomo ngeke unike igciwane ukuthuthukisa, futhi umuntu uyalulama esibhedlela ukuze bathole ukwelashwa ngokushesha.
Kodwa lapha elwa inja kuhlasela ezisongela ukuphila ngokuqondile, it kalula ubuhlungu engashiyanga ingxenye izingalo noma imilenze, futhi sibabulale ngisho nokubabulala. Pho-ke, ukuba baziphathe uma inja lokulwa kubanga Umgadli? Into ebaluleke kakhulu - ukuthola into angakuvikela Ukulunywa: kungaba into yokugqoka, isikhwama, isambulela, iyiphi into ongeke athole emzimbeni.
Khumbula futhi ukuthi injongo eyinhloko inja kuhlasela entanyeni fighter sika, yilapho-ke kuhloswe. Futhi musa ukushiya wena wedwa nje impango. Ungakwazi hit ngangokunokwenzeka phakathi kwamehlo, ukumesabisa, ngangokunokwenzeka, bese neliphithene. Uma uphatha ke, bebayisa wakhe iyiphi into emlonyeni, ngakho wayisa kuye indondo noma empahleni edliwe, khona-ke bayeke ehlasela futhi ushiye.
Ukuwa emva inja kuhlasela
Okubi kakhulu kunakho konke, lapho inja ayikwazi knock phansi bese knock phansi indoda phansi. Esimweni esinjalo kunzima kakhulu ukunikeza iseluleko, futhi izindlela ukuzivikela ngeke kusize, ngoba lowaya muntu isiqala kakade ukwenza ngokomzwelo wemvelo, ibuyisele ukuthatha isikhundla lapho uthola lemali kunabo umonakalo. Ngashaqeka okuholela akusho ukucabanga nezenzo ngokwakhayo. Nokho uzame kulesi simo, futhi, ukuthatha yena esandleni. Futhi khumbula, uma inja ehlasela, yini okufanele uyenze ngemva kokuwa:
wendiza izandla nezinyawo, zama ukuthola ekhaleni inja;
kusukela unogada fighter futhi ufihle entanyeni;
Uma inja ihamba kancane ngokwanele, ubambe wakhe ngu ezindlebeni futhi ebeka wakhe emhlabathini kangcono ngokwabo futhi baqala ukuba kuminyanise;
futhi ezimweni ezimbi kakhulu, le wahlaselwa futhi amaphoyisa Unelungelo ukubulala isilwane.
Inketho scariest - ke Kutama ukuhlasela inja iphakethe. Kodwa lapha kubalulekile ukungaxhamazeli futhi ukushayela off okungenani omunye iphakethe, ngokwenza kanjalo bebonisa ukuthi abanye ukuthi banamandla. Futhi ukuhlaselwa kungagwenywa.
Baningi futhi inja kuhlasela
Ihlasela isilwane bengayi kuphela abahamba ngezinyawo, kodwa futhi lo muntu kwi ibhayisikili. Ngaphezu kwalokho, kulokhu ngempela njalo. Ngiqinisekile eminingi, kwakuyinkinga ukwenza le ride bike, izinja uqaphela ukuthi ngokucijile uqale ukusebenzisa, ezama ukuluma kwezinyawo zakhe, ezimazombe ahamba ngebhayisikili.
Into esemqoka - ningatatazeli, ungabonisi yokwesaba. Akubalulekile kunoma isiphi isimo, ngikwandise kakhulu ukuthi lingakanani ijubane lokuya, ngoba akwanele ukuthi kuphela ukuyithukuthelisa isilwane, ngaphandle inja uyakwazi ngokugcwele uvuka esheshisa ngaphezulu ngokushesha yakho kakhulu. Nokho, uma yena yambamba umlenze wami, ngokucijile ucindezela kwabhoboka. Ngenxa inertia we umhlaseli baphonsa inja phambili. Ngemva kwalokho, ukufika ibhayisikili futhi uyifake phakathi kwakhe nabantwana izilwane njengoba isihlangu.
Ukuhlaselwa nezinye izinja ngesikhathi umnikazi inja
Ngaphandle kweqiniso lokuthi isilwane kungaba ukuhlasela nje ngesikhathi ukuhamba indoda, izimo kanye nezimo uma uhamba nge your own pet, ungakwazi bazithole ubudlova ezinye izinja, noma kungaba ekhaya nomnikazi noma emgwaqweni, izinja elahlekile.
Uma icala, akudingekile yokwelula izinja wabambana, kuzobalwa kuphela babhebhethekisa lesi simo. Kungcono ukuba baphonse nge isikhafu ekhanda wesilwane phambili, isikhafu, ibhantshi, yini uyokwehlisela udidekile wakhe, yeka ukubona shaqa. isilwane yakho ngalesi sikhathi ukuvumela off the leash, yena uyokwenza noma abaleke, noma ngeke akwazi ukuxosha umhlaseli. Uma kungenzeka, engamamilimitha wabambana Hitters amanzi.
Uma usesimweni lapho kuhlasela kungenzeka kuphela, kodwa benza ubufebe, zama ukugwema ke: Nikeza inja yakho umyalo "ahlale", futhi lowo wazama ukuhlasela futhi axoshe. Ngakho oyowunikela isilwane zakho ziyaqonda ukuthi uzobe adiliza nge isimo bebodwa, ngaleyo ndlela sigweme ukuthi isilwane sakho uye wabambana umhlaseli.
Bee of amabhodlela epulasitiki ukuhlobisa imbali ingadi yakho
Kuyini ibanga kusuka eMoscow kuya Kiev? Yini futhi kanjani isikhathi?
"Maynkraft": Amalungiselelo ekhaya Ingaphakathi
Kuyini ukukhubazeka ukubheja? Umsuka nezinhlobo